Nhau - Yakadzvanywa mweya wekupupa moto mudziyo, iyo nemesis yemakemikari moto
Yakadzvanywa mweya furo moto kudzima mudziyo, iyo nemesis yemakemikari moto
Bhegi rakamanikidzwa mhepo furo moto kudzimisa mudziyo
Nekukurumidza kufambira mberi kwemaitiro emazuva ano, mamiriro emoto ari kuramba achiwedzera kuomarara. Kunyanya, makambani epetrochemical anosangana zvakanyanya uye zvakanyanya kukurumidza mukugadzirwa kwezuva nezuva. Kamwe paine njodzi ine njodzi yemakemikari yengozi ikaitika, ine kamwe kamwe, nekukurumidza uye nekukuvara kwakasiyana siyana. , Kune nzira dzakawanda dzekukuvara, kuona hakusi nyore, kununura kwakaoma, uye nharaunda yakasvibiswa. Mukupindura kuchimbichimbi senge ine chepfu uye inokuvadza gasi nharaunda, kununura munzvimbo diki, kurwira moto zvechimbi-chimbi zvemhando dzakasiyana dzemoto, uye kudonhedza kusvibiswa kwemakemikari, midziyo yega yega inowanzoita basa rakakosha.
Iko kuvandudzwa kwemudzimba wega kudzimisa moto uye kudzikisira michina iri kumashure kumashure uye inogumira kune yakashata yekumanikidza inopupuma nzira. Iyi furo femo yakabviswa zvishoma nezvishoma nekuda kwekugutsa inopupa furo. Iko kusimba kwekumanikidza kupupira furu kunoenderana nekofi (compress mweya furo) system iri kuramba ichiwedzera kufarirwa mumunda wekupupa moto moto uye kudzikisira.
1. Mubatanidzwa wekufona kwemhepo uye furo moto kudzimisa basa kuchengetedza kuchengetedzeka kwemunhu
Iyo bhegi mweya-kufema uye furo moto wekudzimisa mudziyo zvine hungwaru unosanganisa mweya wekufema midziyo pamwe nefuro moto wekudzimisa moto. Kana ichishandiswa, chifukidzo chekufema chinonyatso kudzivirira gasi ine chepfu inogadzirwa panguva yekutsva uye kusvibiswa kwemakemikari kubva mukukuvadza muviri wemunhu. Iyo maski inotora hwindo rimwe remaziso uye hwindo hombe. Iyo lens yekuona, kuburikidza nekutonga kwenzira yekufema mweya, inoita kuti lens igare yakajeka uye yakajeka panguva yekushandisa iyo izere kumeso kumeso, kuchengetedza kumeso uku usingavhariri mutsetse wekuona.
Iyo yepamberi yakanaka kumanikidza kupupira furu yechinhu ichi inoita kuti furo igadzike uye iyo yekuwedzera iri kumusoro. Mushure mekunge vanhu vari munzvimbo yemoto vafukidzwa nemuviri wese pfapfaidzo, dziviriro inokwanisa kuumbwa kuti ivadzivirire kubva mukukuvara kwemurazvo uye kudzivirira zvirinani kune vanoshanda uye kutsvaga uye kununura zvinhu.
2. Iyo knapsack dhizaini iri nyore kutakura
Iyo yekukwiza mweya-kufema uye furo moto wekudzimisa mudziyo unotora iyo knapsack dhizaini uye zviri nyore kutakura. Chigadzirwa ichi chiumbane murongedzero, chinokurumidza kufamba musana, chisina maoko, chinokwira kukwira nekununura, uye chinogona kusangana nezvinodiwa nevashandisi kuti vaite mabasa ekurwisa moto nekukurumidzira mumigwagwa yakatetepa nenzvimbo. Ichi chimiro chinogadzira mpb18 chishandiso chakakodzera kumatunhu akasiyana siyana akaomarara uye mashandisiro. Yakakura kwazvo.
3. Moto wakadzika kudzima mwero
Iwo maviri-anoshandisa mweya-kufema uye furo moto wekudzimisa mudziyo une mwenje wekudzimisa moto we4a uye 144b, iyo inodarika iyo simba rekudzimisa simba remoto unotakurika wekudzimisa moto kakawanda. Ichi chishandiso chinogona kudzima zana nemakumi mana nematatu emafuta pani murazvo wemoto wakaoma wepeturu.
4. Yakareba pfapfaidzo daro
Nekuti kupisa kwemwaranzi yemoto kunokonzeresa kuti vanhu vatadze kusvika, zvinonetsa kune vanodzima moto zvavo kushandisa simba ravo rekudzimisa moto. Iyo pfapfaidzo yedhijitari-shandisa mweya-kufema uye furo moto wekudzimisa mudziyo ndeye gumi metres, ino yakapetwa katatu iyo yeakaoma poda moto zvinodzimisa moto uye ka5 iyo yegesi fire fire extinguishers Times. Zvakachengeteka kune vanoshanda kudzima moto kure nekwavanobva moto, uye mamiriro avo epfungwa akagadzikana, izvo zvinovandudza zvakanyanya kurwisa moto.
5. Kudzokorora kuzadza uye kushandisa pane saiti
Iyo bhegi rinofema mweya-kufema uye furo moto wekudzimisa mudziyo hausi wekumanikidza-kutakura, saka unogona kuzadzwa chero nguva uye chero kupi. Izvo zvinhu zvebhari zvinopesana-ngura uye zvinogona kuzadzwa nemvura nyowani, mvura yegungwa, nezvimwe. Mushure mekupfekedza bhakiti remoto unodzima mvura pane saiti, tora mvura padyo woisanganisa neyekutanga furo mvura. Inogona kushandiswa zvakare pasina kumutsa, uye simba rekudzimisa moto rakapetwa kaviri.
6.Ontology chengetedzo matatu-rukoko vimbiso
Iyo yekutanga dura redziviriro: iyo mbiri-shandisa mweya-kufema uye furo moto kudzimisa chishandiso inoshandisa yakajairwa kabhoni fiber-ronda rinoumbwa gasi masirinda. Iyo magiramu emagetsi ane hunhu hwehuremu huremu, kukwirira kwekutakura uye yakanyanya kuita kwekuchengetedza. Iyi parizvino ndiyo yepasi chengetedzo yepamusoro maGirinda.
Nhanho yechipiri yekudzivirira: mudziyo wekumanikidza wekudzora wakashongedzwa neyekuchengetedza vharuvhu kuchengetedza iyo yekubuda kumanikidza kweiyo yekumanikidza yekudzora kubva pakuwandisa. Kana iko kuburitsa kwakapfuura 0.9mpa, iyovhavha yekuchengetedza inozovhura yega kuti igadzirise kumanikidza kuchengetedza opareta kubva pakumanikidza kukuru.
Chikamu chechitatu chekudzivirira: geji yekumanikidza yakapfekerwa pachifuva cheanoshanda, uye yakadzika-yekumanikidza alarm kifaa chakabatanidzwa. Kana kumanikidzwa kwegirinda regesi kwadzikira pane 5.5mpa, alarm ino ridza alarm inopinza kuyeuchidza mushandi kuti kumanikidzwa kwesilinda yegasi hakuna kukwana uye kubuda munzvimbo yacho nenguva.
7. Yakachena uye inochengetedza zvakatipoteredza
Guruva remupfu wakaoma mudziyo wekudzimisa moto unosvibisa nharaunda uye unoshatirisa mweya wevanhu wekufema. Inogona kunge ichikachidza kana ikashandiswa munzvimbo isina kutenderera mweya. Iyo bhegi mweya-kufema uye furo moto kudzimisa huviri-chinangwa chishandiso inoshandisa zvakatipoteredza zvine hunyanzvi multifunctional foam vamiririri. Iyo furo inosaswa haina kutsamwa kune yekufema nzira uye ganda. Iyo furo inongozvidzika mukati memaawa mashoma uye haizosvibisa nharaunda yakapoteredzwa. Zviri nyore kuchenesa pane saiti mushure mekushandisa. Akaisa mutemo wenyika wekuchengetedza nharaunda.
8. Kubvisa maronda
Iyo bhegi mweya-kufema uye furo moto-kudzimisa huviri-chinangwa chishandiso zvakare ine yakajeka mikana mukudzikisira nekuda kweayo ayo echimiro maitiro. Iyo dhiramu inopesana neanokanganisa uye inogona kuzadzwa neye inoenderana decontamination solution maererano nerudzi rwehuturu; iyo bhuti inobviswa uye iri nyore kutsiva. Uye ine hunhu hweakanaka maatomisheni mhedzisiro, mizhinji-inotungamirwa mharadzano yemhute inoyerera, hombe yekuvhara nzvimbo uye yakasimba kunamatira. Nayo pachezvayo yekufona kwemhepo, inogona kukurumidza uye nekururamisa hutachiona vanhu, mota, zvishandiso nezvivakwa, masosi ekushatisa, nezvimwewo, zvinobudirira kupatsanura hutachiona uye kudzivirira kupararira kwekusviba.
9. Makomborero ekupaza nekudzivirira mhirizhonga
Kuwedzera zvinotsamwisa pachigadzirwa ichi inova chombo chekudzivirira mhirizhonga. Iyo pfapfaidzo yemamirimita gumi uye kugona kwakakura kwe17l kunoona yakasimba simba rekudzivirira mhirizhonga kugona kwechigadzirwa.
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya mukudzimisa moto, makemikari, kutumira, peturu, kuchera uye mamwe madhipatimendi, kune vanodzima moto kana vanunuri kuti vanyatso chengetedza moto, kuponesa, kuyamura njodzi uye kununura munzvimbo dzakasiyana noutsi hwakakora, gasi rine chepfu, mweya kana oxygen kushomeka. Basa rekubatsira.